एक रात सुतेको ६ लाख दिँदै कम्पनी, केहि घण्टामै बनिन्छ मालामाल ! « Lokpath
२०७७, १२ पुष आईतवार ०९:१६
एक रात सुतेको ६ लाख दिँदै कम्पनी, केहि घण्टामै बनिन्छ मालामाल !
प्रकाशित मिति : २०७७, १२ पुष आईतवार ०९:१६
काठमाडौं । आजको समयमा जो पनि धनी बन्न चाहन्छन् । तर धनी बन्नको लागि कडा मिहेनत भने गर्न कोहि चाहदैनन् ।
धेरैजसो मानिसहरुले धनी बन्नको लागि विहानै उठ्नु पर्दछ, जहिल्यै एक्टिभ रहनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछन् । तर एक खबरका अनुसार पपुलर स्ट्रिमिङ्ग वेबसाइट ट्विट्च आफ्ना कर्मचारीहरुलाई (स्टार्ट इयरनिङ मनि बाई स्लिपीङ) को बदलामा लाखौँ रुपैयाँ दिइरहेको छ ।
यो वेबसाइबाट एक रात सुत्दा तपाई लखपति बन्न सक्नुहुन्छ । तर यसका लागि तपाईले आफ्नो बेडको नजिक वेबक्याम लगाउनु पर्दछ । र सुत्दा लाईट स्ट्रीमिङ गर्नुपर्दछ । यस्तो गरेका तपाई लाखौँ रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुनेछ ।
सुत्ने अलावा कम्पनीले तपाईलाई अन्य कुराहरुको स्ट्रीमिङ गर्ने अनु’मति पनि दिने गर्दछ । जस्तै तपाई कला। म्युजिक र गेमिङ जस्ता कुराहरु लाइभ स्ट्रीमिङ गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ ।
केहि दिन अगाडि अमेरिकाका भिडियो मेकर म्याथ्थे रिनाडोले एक रातमा आफू सुतेर लाइव स्ट्रीम गर्दा ५६०० डलर कमाएका थिए ।